सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /International News/सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख !!
सुशान्तको देहत्याग नभई ह’त्या गरिएको आशंका, काकाले पनि खोले मुख !!
प्रहरीले कुनै नोट नभेटेको बताएको छ । उनका साथीहरुले ढोका ढ्कढ्काउँदा नखोलेपछि ढोका फु’टाएर हेरेको बताइएको छ । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सकृ`य थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले पोष्ट गरेका स्टाटस र सामग्रीले उनी कुनै मा नसिक त’नावमा थिए भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
उनी एक्लोपनको सि’कार पनि भएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा निकै भावुक स्टाटस लेखेको देख्न सकिन्छ । उनले आफ्नो जिवनको अन्तिम पलमा लेखेको एउटा कविताले उनमा निरासा थियो भन्न सकिन्छ । उनले यस्तो लेखेका थिए ।धमिलो भएको विगत आँ’सुको थोपा बन्दै उडिरहेछ, असीम सपनाहरु छन् जसले मुस्कानलाई आकार दिइरहेका छन्, यो क्षणभरको जीवनले आँ’शु र मुस्कानबीच मोलतोल गरिरहेछ ।
यो नै अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको अन्तिम कविता थियो । कवितावाट उनको मनमा केही कुरा चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उनी जिवनको दुईवाटोमा थिए । मुस्कान रोज्ने की आँ’शु ? गत बुधवार इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको उनको यो भावनामा धेरै कमेन्ट आएका छन् ।उनले आफ्नी आमाको तस्बिर पोष्ट गर्दै कविताका यि दुई लाइन कोरेका थिए । जसमा आमा र आफ्ना तस्बिर थिए । उनले ति तस्बिर पनि श्यामश्वेतमा राखेका थिए । ह्या’सट्या’गमा लेखेका छन् ‘माँ’ लेख्दै सार्वजनिक गरेका यि कविता र उनले राखेका तस्बिरले उनी आमाको यादमा थिए भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ ।
हामी नेपाल फर्कन चाहान्छौं, सरकार !
मन्त्रि`परिषद बाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नेपालको नक्सा पारित !! अब यस्तो हुनेछ नेपालको नक्सा !